Kuyini ukugaya i-cnc? | I-PTJ hardware inc.
Ucingo: +86 0769 82886112 Blog Imibuzo Evame Ukubuzwa Ividiyo
Ukwelashwa Kwendawo Engaphezulu
Izingxenye Auto metal
Ukuthengwa Kwenani Lonke
Izinhlobo zezinto ezibonakalayo
Ikhaya > Imisebenzi > CNC Milling
YINI UKUKHANDA KWENCWADI?
CNC Milling, kuhlanganise Milling mathupha, kuyinto ukulungisa imishini inqubo esetshenziselwa ukwenza izingxenye zeprismatic.
Abasiki bemishini abanekhanda elijikayo lokusika eliyindilinga nemitshingo eminingi kuvame ukubizwa ngokuthi izigayo zokuphela noma izigayo zokuphela ezingahanjiswa ngezimbazo ezihlukile zokuklama izikhala ezincane, ama-grooves, imigwaqo yangaphandle, njll.,
Amathuluzi omshini wokugaya abizwa ngokuthi imishini yokugaya. Imishini yokugaya i-CNC imvamisa izikhungo zemishini ezilawulwa ngenkomba, futhi ukugaya kwenziwa esitolo somshini.
Machining Milling Metal Services(i-aluminium ▲)
Sekuyiminyaka eyishumi, i-PTJ Hardware ibingumholi e-china phambili kwezobuchwepheshe
sisebenzisa izinhlelo zakamuva zokukhiqiza ukunikela ngensimbi ephezulu engenasici futhi
izinsizakalo ze-aluminium machining.
Machining Plastic Izingxenye (uhmw▲)
I-PTJ Hardware inikela ngemishini eyenziwe ngokwezifiso zepulasitiki nokuklama izimboni
izinhlelo zokusebenza. Abasebenzi be-PTJ banezingxenye ezikhethekile zokukhiqiza ulwazi ezisebenzisa
UHMW, futhi ingakwazi ukwenza umshini futhi yenze ingxenye enemba ehlangabezana nemininingwane yakho ngqo.
Ukubekezelelana kwe-CNC Milling?
Ukubekezelelana kwethu okujwayelekile kwe-CNC machining yensimbi yi-DIN-2768-1-emihle futhi epulasitiki, i-DIN-2768-1-medium. Ukubekezelelana kuthinteka kakhulu yingxenye yejiyometri nohlobo lwezinto ezibonakalayo. Abaphathi bephrojekthi yethu bazobonisana nawe kuzo zonke izingxenye zephrojekthi yakho futhi bazofuna ukunikela ngezinga eliphakeme kakhulu lokunemba okungenzeka.
Amakhasimende ethu amaningi ahlinzeka ngemidwebo yawo, kepha uma ungenayo eyakho, singathatha imibono yakho siyenze izingxenye zethu sisebenzisa amandla ethu we-CAD / CAM asendlini..
Kungani Khetha PTJ CNC Milling Services?
Ukukhiqiza - Izikhungo zokucubungula ze-PTJ zanamuhla zikhiqiza izingxenye ezisuka kusitoko sebha zisebenzisa izimbazo ezifika ku-14. Ithuluzi lethu lomshini o-multi-tasking lenza izindleko zingasebenzi kahle ezingxenyeni zombili ezinkulu nezincane. Ngemininingwane ebaluleke kakhulu, bheka uhlu lwethu oluphelele lwemishini.
Ikhono le-CAD / CAM- Izingxenye eziningi zenqubo yokukhiqiza yokugaya, kusukela ekudalweni kwejigi kuya ekuphumeni okuphelile kwemishini yethu yokucubungula i-CNC, ziholwa uhlelo lwe-ERP oluqinisekisa ukukhiqizwa okuqondile kwamajometri ayinkimbinkimbi.
yizinhlobonhlobo - Iphothifoliyo ye-PTJ yezinsizakalo ze-CNC zokugaya zifaka izinto ezenziwe ngezinhlobo eziningi zezinto ze-CNC; kufaka phakathi i-aluminium, i-titanium, insimbi engagqwali, ithusi nezinye izinsimbi namapulasitiki, ukuhlangabezana nezidingo ezikhethekile zamakhasimende ku-aerospace, yezimoto, yezokwelapha, ye-elekthronikhi nokuningi.
IZIFUNDO ZETHU ZOKUQHAQHA I-CNC
Ubungani be-PTJ namakhasimende emhlabeni jikelele kule minyaka eyishumi edlule
I-PTJ ibilokhu ikhonza amakhasimende emhlabeni wonke kusukela ngo-2007. Silokhu sihlwaya amakhono ethu futhi sithuthukisa imishini yethu ukuqinisekisa ukuthi amakhasimende ethu anelisekile. Sinamakhasimende amaningi athembekile asebenze nathi iminyaka engaphezu kwengu-10.
Ake sibuke i- videos futhi ufunde kabanzi mayelana Izingxenyekazi zekhompyutha ze-PTJ.
● Cnc Machining Izithuthi Izingxenye
● Cnc Machining Electronics Izingxenye
● CNC Machining Izindiza Izingxenye
● CNC Machining Medical Izingxenye
● Funda imininingwane eyengeziwe ye- Imishini Yensimbi
Phendula Kungakapheli amahora angama-24
Inombolo yocingo: + 86-769-88033280 E-mail: [i-imeyili ivikelwe]
Sicela ufake amafayela (amafayili) ukuze udluliselwe kufolda efanayo ne-ZIP noma i-RAR ngaphambi kokunamathisela. Okunamathiselwe okukhulu kungathatha imizuzu embalwa ukudlulisa ngokuya ngejubane le-inthanethi yangakini :) Ngokunamathiselwe okungaphezu kuka-20MB, chofoza WeTransfer bese uthumela ku [i-imeyili ivikelwe].
Lapho zonke izinkambu sezigcwalisiwe uzokwazi ukuthumela umyalezo / ifayela lakho :)
Isingeniso sezinto ezibonakalayo
I-Copyright © Dongguan PTJ Hardware Products Co, Ltd. Wonke Amalungelo Agodliwe.